China NBR yoga mat is super thick non slip and durable Manufacture and Factory | I-Tianzhihui
I-NBR yoga mat ishukulu ngokungagudluki futhi ayishebi
Omata be-Yoga bangenziwa ngezifiso ngama-LOGO ahlukahlukene njengoba kudingeka, futhi banikeze ubuchwepheshe bokuphrinta obuhlukahlukene njengokufaka embossing, ukuphrinta usilika, ukudlulisa okushisayo, ukuphrinta nge-offset, nokuphrinta kwe-laser. Sinikeza insizakalo ye-OEM yobungcweti nge-MOQ ephansi, isivinini sokuphrinta okusheshayo, ikhwalithi ethembekile, inani lentengo ephansi, ukonga izindleko, nezinzuzo ezisobala.
Igama lomkhiqizo: I-Nbr Yoga Mat
Usayizi wemikhiqizo: 183 * 61 * 1 (CM)
Usayizi webhokisi: 51 * 40 * 63 (CM) / 0.17 （m³） / 16.5KG
Umbala: okunsomi, okubomvana, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okusawolintshi, okuluhlaza okotshani, okumnyama, i-aqua, okumpunga nokugqamile okuphuzi njll.
Izinzuzo ze-NBR yoga mat.
Ukusekelwa okuqinile, Izinto ezingangcolisi, i-Rapid rebound, Isikhumba esiseduze esiseduze, Ukumelana okuhle kwe-skid.
Imibala evame ukusetshenziswa: onsomi, opinki, oluhlaza okwesibhakabhaka, owolintshi, oluhlaza okotshani, omnyama, i-aqua, ompunga, nephuzi elikhanyayo. Ngaphezu kwemibala evame ukwenziwa, singenza ngokwezifiso imibala ehlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Amapharamitha Omkhiqizo Oyisisekelo
Igama lomkhiqizo I-NBR Yoga mat Izinto NBR (ECO friendly nitrile iraba)
Usayizi wemikhiqizo 183 * 61 * 1 (CM) Ukupakisha Ifilimu yePlastiki + ibhokisi
Usayizi ibhokisi I-58 * 45 * 65 (CM) I-CBM 0.17m³
Ubuningi (ibhokisi) 9 izingcezu / ibhokisi Isisindo ibhokisi I-11 (KG)
Isicelo abafundi besikole samabanga aphansi badansa, i-yoga
Umsebenzi ukumuncwa ukushaqeka, ukufakwa komsindo, ubufakazi bomswakama
Umbala Imibala evame ukusetshenziswa: onsomi, opinki, oluhlaza okwesibhakabhaka, owolintshi, oluhlaza okotshani, omnyama, i-aqua, ompunga, nephuzi elikhanyayo. Ngaphezu kwemibala kaningi
eyenziwe, singenza ngokwezifiso imibala ehlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Isitifiketi I-CE, EN71-1,2,3, ROHS, PACH, REACH, PROP 65
Kwenzelwe ikhasimende Usayizi, umbala, iphethini nokunye komkhiqizo konke kwamukelwa ukuthi kwenziwe ngezifiso.
Uhlu Lokucaciswa Komkhiqizo (Iyunithi: cm)
Slayida igundane kwesokunxele nakwesokudla ukuze ubuke imibala ehlukahlukene
Amanothi ngokucaciswa komkhiqizo.
Sinezincazelo ezahlukahlukene, hhayi zonke ezikuwebhu. Njengamanje, kunamasayizi amaningana asetshenziswa kakhulu kuwebhusayithi. Uma ungabutholi usayizi ofanele, ungaxhumana nomphathi we-akhawunti yethu. Ngasikhathi sinye futhi singakunikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso.
Uthambile uthambile: Cushion umthelela wendololwane namadolo phansi.
Okungasheleli kobuso beMatte: Eduze nephethini yesundu, umphumela ongcono we-anti-skid.
Izinyosi zezinyosi zeBionic zivaliwe i-stomata. Ihlanganiswe, ukuqina okuqinile, kukhululekile futhi kuthambile.
I-Yoga ayinamphumela wokunakekelwa kwezempilo kuphela, kepha futhi inomphumela wokwehlisa isisindo. Ngakho-ke, abantu abaningi manje bazinikela kuphrojekthi ye-yoga. Ukukhethwa kwezinsiza zokwenza i-yoga kulula kakhulu. Omata beYoga bangenziwa futhi phansi uma usekhaya. Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwamata we-yoga kungcono kakhulu. Ake sifunde ngokusetshenziswa kwamacansi e-yoga.
Ikakhulukazi efanelekayo: ama-sit-ups, ama-aerobics, ukuqina kwangaphandle, ukwesekwa okuyisicaba, ama-push-ups, izivivinyo ze-yoga neminye imikhakha eminingi. Ngemuva kokuyisebenzisa kuphedi, ingagwema ukulimala ezingxenyeni ezahlukahlukene zomzimba ngesikhathi sokuzivocavoca, izinhlungu namamaki amnyama abangelwa ukulimala, futhi ingavimbela nemihuzuko emgogodleni, emaqakaleni, emathanjeni enqulu, emalungeni edolo nakwezinye izingxenye.
Langaphambilini EVA Taekwondo uhlaka super obukhulu non-ukushelela futhi iqine
Olandelayo: Ithawula le-yoga elimamathela isithukuthuku elifanelekile elifanele ijimu
nbr umhlabeleli we-yoga mat
izingane ze-nbr yoga mat
nbr obukhulu yoga mat
intengo ye-nbr yoga mat
Ngokwezifiso mat mat
Amasethi ayi-11 wokuqina kwentambo yokudonsa intambo yokudonsa
Isitolo esidayisa yonke impahla Opening Double Deck Camping ...
iphazili yokuzivocavoca mat, I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, Isikhwama se-Yoga Sling, I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, Isikhwama Sokuhamba seYoga,